Sweden oo Xukun ku riday Qofkii ka Danbeeyay Dilka Booliska ee Magalaada Götenborg
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo Xukun ku riday Qofkii ka Danbeeyay Dilka Booliska ee Magalaada Götenborg
November 20, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Eedeysanaha oo 17-jir ah ayaa Maxkamadda Gobalka Göteborg ku xukuntay 8-sanno oo xarig ah kadib markii lagu helay inuu dilay Boliska Andreas Dannemann.
Booliisku waxay u suurtagashay inay soo qabtaan eedaysanayaasha laba maalmood ka dib markii uu dilka dhacay, waxaana ka mid ahaa caddaymaha lagu caddeeyey baadhitaannada, hubkii loo adeegsaday fal-dembiyeedka, iyo helitaanka DNA-da wiilka dhallinyarada ah
Dhar, boorso uu ku jiro hubka automatiga ah, iyo maaskaro afka laga xirto ayaa sidoo kale laga helay meel keymo ah, iyo sidoo kale mooto koronto, taasoo la rumeysan yahay in gacan ku dhiiglaha uu u isticmaalay masaafo yar oo wadada. Si kastaba ha ahaatee, ninka dhalinyarada ah ayaa diiday dhammaan eedeymaha lagu soo oogay, sida uu sheegay qareenkiisa, Hans Palm.
Booliiska ayaa la socday dhaq-dhaqaaqa wiilka 17-jirka ah maalintii uu fal-dembiyeedka dhacay, inkastoo aysan jirin wax caddeyn ah oo muuqaal ah oo muujinaya intii uu booliiska toogtay.
Rasaasta halista ah ayaa lagu riday Andreas Dannemann wax yar ka dib ninkii toogashada geystay iyo kuwa kale ayaa lagu eryay koonfurta Biskopsgården. Sida laga soo xigtay maxkamadda degmada, waxaa la ogaaday in 17-jirka uu weeraray mid ka mid ah raggii baxsaday. Andreas, oo ah nin booliis ah, ayaa ku yimid mooto markii uu la kulmay ninka toogashada geystay, ilaa hadda, fikradaha ayaa ku kala qaybsan in dembiilaha uu ogaa inuu toogtay nin booliis ah, ama haddii dembiilaha uu aaminsan yahay inuu toogtay qof eryanaya.
Dagaal gaangis ah oo gabo-gabo ah Sida uu sheegay xeer ilaaliyuhu, dilku waxa uu ka dhacay colaad toban sano soo jiitamaysay oo u dhaxaysay shabakado dambiilayaal ah oo ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta degmada Biskopsgården ee Letobori. Wiilkan oo 17 jir ah ayaa ka soo jeeda waqooyiga degmada, iyadoo isku dayga dil iyo dil uu ka dhacay koonfurta degmada. Aragtida la dhisay ayaa ah in 17-jirka loo xilsaaray inuu toogto hal ama dhowr qof oo ku sugan Grid Southern.
Isla 17-jirkan ayaa lagu helay isku day dil, isagoo 15 jir ah, ka dib markii uu qoorta ka galiyay qof, sida uu sheegay xeer ilaaliyuhu, dhibbanaha xilligaas wuxuu ka mid ahaa kuwa la sheegay inuu isku dayay inuu hadda dilo. .
Isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan ee loo yaqaano (Machine) ayaa saameyn ku yeeshay shuruudihii lagu soo saari lahaa xukunka, iyadoo loo arkayay xukun ka sii daran, iyadoo ninkan dhalinyarada ah uu da’diisu ka yar tahay 18 sano jir, sida uu Xeer Ilaaliyaha Qaranka dalbaday “Xabsi. dembiilaha muddo aan ka yarayn toban sano,” in kasta oo dadka da’doodu ka yar tahay 18 sano sida caadiga ah lagu xukumo xabsi albaabadu u xiran yihiin carruurta yaryar ugu badnaan afar sano. Sidaas awgeed maanta waxaa caddaatay in maxkamadda gobolka Göteborg ay inta badan raacdo xeer-ilaaliyaha guud.